Barack Obama wuxuu qoraalkiisii ​​ugu horreeyay ee uu ku qoro iPhone | Wararka IPhone
Barack Obama wuxuu qoraa tweet-kii ugu horreeyay ee akoonkiisa shaqsi ee iphone
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama, ayaa furay saacad ka hor Twitter-ka shaqsi ahaan. Qof kastaa wuu ogyahay inuu mar hore ku qori jiray akoonnada @BarackObama iyo @WhiteHouse, laakiin kuwani waxay ahaayeen laba koonto oo uu maamulo Maareeyaha Beesha ee Aqalka Cad oo in yar oo ka mid ah farriimaha twitter-ka ku jira xisaabaadkan ayuu Obama sheegayaa
Koontada cusub ee shaqsiyeed waa @POTUS waxaana loo qaatay inaanay haysan "shaandhada" la-taliyayaasheeda. Iyo, inkasta oo had iyo jeer la sheego in Barack Obama iyo xubnaha kale ee Aqalka Cad labadaba ay isticmaalaan Blackberry, bal qiyaas meesha qoraalkan ugu horreeyay laga soo diray?
Xaqiiqdii, qoraalkii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Mareykanka soo dhigo bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka waxaa laga soo diray iphone. Taasna kaliya maahan, laakiin xilligan, koontada @POTUS, oo aan ku adkaysanayno in "aragti ahaan" uu si toos ah u maamulo Barack Obama, ayaa horay u soo dirtay 3 tweets, laba ka mid ah tweetskiisa iyo mid jawaab u ah koonto kale, iyo saddexda tweets waxaa soo diray "Twitter for iPhone".
Si aad u ogaato halka farriinta laga soo diro, waxaad u baahan tahay codsi awood u leh inuu akhriyo metadata, sida ku dhacday Tweetbot. Sida aad ku arki karto shaashadaha soo socda, wax kasta oo Obama qoray ilaa hadda waxaa loo diray macmiilka rasmiga ah ee Twitter-ka ee iPhone. Maxaa ku dhacay Blackberry-ka oo aad markasta sheegto inaad u isticmaashay sababo nabadgelyo awgood? Waxay u muuqataa in Aqalka Cad uu arki lahaa in amniga iPhone uu kufiican yahay tan iyo markii la bilaabay iOS 8 bishii Sebtember ee la soo dhaafay, si ay iyagu u isticmaali karaan. Astaamaha sida nidaamka kaydinta nidaamka buuxa ayaa ka dhigi kara iPhone aad u adag in la jabsado.
Nooca rasmiga ah wuxuu xaqiijinayaa in IPhone-ka la adeegsaday uusan aheyn tii Obama, laakiin uu yahay mid fuliya xafiiska madaxweynaha. Waxay yiraahdeen Obama wuxuu sii isticmaalayaa Blackberry-kiisa taleefankiisa koowaad. Laakiin, si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in tweets-ka laga soo diray iphone horeyba waxay u soo jeedineysaa in Blackberry uusan aheyn nooca kaliya ee Aqalka Cad uu maskaxda ku hayo arrimaha amniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Barack Obama wuxuu qoraa tweet-kii ugu horreeyay ee akoonkiisa shaqsi ee iphone
dabcan ... oo aad u qaadatid iphone meel walba dabcan dabcan .... Siyaasi Mareykan ah ma sitaan iphone ama xabad, waxay wataan mid kamid ah kuwa madow ee neceb black. badiyaa badbaadada
"Laakiin, si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in tweets-ka laga soo diray iphone-ka ayaa durba soo jeedineysa in Blackberry uusan aheyn astaanta kaliya ee ay ka tixgeliyaan Aqalka Cad ee arrimaha amniga.
Hagaag maya. Qofna ma haysan karo iPhone kaliya dartiisa darteed? Waxay ku isticmaalaan taleefanka Iphone-ka Aqalka Cad adiguna waad horay u booday adigoo dhahaya waa sababo amni. Jooji sameynta sheekooyinka, kaalay… ..
Galab wanaagsan, Carlos J. Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay Aqalka Cad (ama Obama laftiisa) wuxuu yidhi ma ogolaanayno inuu haysto iphone sababo ammaan awgood. Hadday haddeer u oggolaadaan, ama been bay sheegeen, oo anigu canbaar iyo canbaar midna halkaas kuma aan dhigin, ama hadda si ka duwan bay u arkaan.
U ogolaan maayaan madaxweynaha sababo nabadgelyo awgood, laakiin isaga uun bay u oggolaadaan. Waxaan xasuustaa inaan ku akhriyay waqti dheer kahor nooc sahan ah oo qaar ka mid ah shaqaalaha Aqalka Cad ay sameeyeen.
Ma si dhab ah ayey u xiran yihiin si aysan uga fikirin waxyaabaha soo socda?
- Blackberry waxkasta oo amaanka ah (wicitaano, waraaqo, dukumiintiyo, iwm iwm)
- iPhone loogu talagalay Hobby, twiter, facebook iyo xafiis aan rasmi ahayn oo Obama ah ama shaqsiyadeed.
Sida loo arko xusuusta aan ku isticmaalo iPad-ka